အစာငြင်းစိတ်ဝေဒနာ - ဝီကီပီးဒီးယား
အစာငြင်းစိတ်ဝေဒနာ သည် စားသောက်ပုံမူမမှန်သော စိတ်ဝေဒနာတမျိုး ဖြစ်ပြီး လက္ခဏာအနေဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ အစာစားရန် ငြင်းခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်မည်ကို စိုးခြင်း၊ ပိန်စေရန် အလွန်အမင်းလိုလားခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာအား စိတ်တိုင်းမကျခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။  အရိုးငြမ်းဖွဲ့ပုံပျက်ခြင်း၊ သန္ဓေမအောင်ခြင်း၊ နှလုံးထိခိုက်ခြင်းအပြင် အခြားရောဂါများဖြစ်အောင် ဖိတ်ခေါ်တတ်သော ရောဂါမျိုးတည်း။
ဤဝေဒနာရှိသူတို့မှာ အမြဲလိုလိုပင် ဆာလောင်စိတ်ဖြစ်နေသော်လည်း ထိုစိတ်ကို ထိန်းချုပ်ရသည်ကပင် အရသာတွေ့နေတတ်၏။ မိမိကိုယ်ကို အလွန်ဝသည် ထင်သော်လည်း တကယ်တမ်းမူ အလေးမပြည့်။  သို့သော် အလေးမပြည့်ခြင်းကို လက်မခံဘဲ လက်ရှိအနေအထားမှာ ကျင့်သုံးနေသော အစာလျှော့မှုကြောင့်ဟု ယုံကြည်နေတတ်သည်။  အစာအနည်းငယ်သာ စားခြင်း၊ အချို့အစားအစာကိုသာ စားခြင်းတို့ ပြုသည်။ အလွန်အမင်းကျင့်သုံးသူတို့မှာ စားပြီးလျှင် လက်နှိုက်အန်သည်ပင် ပြုတတ်၏။ ဝမ်းနှုတ်ဆေး အမြဲစားကာ ပိန်စေရန် အားထုတ်သည်များလည်း ရှိသည်။ အမျိုးသမီးတို့တွင် ရာသီအလာ ရပ်သည်ပင် ဖြစ်တတ်၏။ အလွန်ဆိုးဝါးသော ဖြစ်စဉ်တို့တွင် ဝေဒနာရှင်သည် နေ့စဉ်စားရမည်ကိုပင် မစားတော့ဘဲ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို လျစ်လျူရှုလေသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် လူနာရှင်တို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အစာပိုက်သွင်းရတော့သည်။ 
အစာငြင်းစိတ်ဝေဒနာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းခံကို မသိရသေး။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလက်ခံချက်များသည်ပင် အဓိကကဏ္ဍအဖြစ်သည်။ ဝေဒနာရှင်အချို့မှာ ပိန်ခြင်းကို ရောဂါများခြင်းထက် တန်ဖိုးထားသည့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတို့ကြောင့်တည်း။ မြန်မြန်လျင်လျင်လုပ်ရန်လိုသည့် ကစားခုန်စားနေရာများ၊ ပျောင်းပျောင်းပျော့ပျော့ဖြစ်သင့်သော အကအလှနေရာများတွင် အတွေ့များ၏။ 
↑ "What are Eating Disorders?". NIMH. Archived from the original on 23 May 2015.
↑ Attia E (2010). "Anorexia nervosa: current status and future directions". Annual Review of Medicine. 61 (1): 425–35.
↑ Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5 (5 ed.). Washington: American Psychiatric Publishing. 2013. pp. 338–345.
↑ "Force-Feeding of Anorexic Patients and the Right to Die Archived 23 November 2020 at the Wayback Machine." (PDF).
↑ Arcelus J, Witcomb GL, Mitchell A (March 2014). "Prevalence of eating disorders amongst dancers:asystemic review and meta-analysis". European Eating Disorders Review. 22 (2): 92–101.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အစာငြင်းစိတ်ဝေဒနာ&oldid=706123" မှ ရယူရန်